China MR5 Marbra Polishing Crystallizer orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Jinqiu
MR5 dia vokatra fanarenana marbra mahazatra, ny fampiasana matetika dia tsy hanova ny endrika voajanahary amin'ny marbra.
Ny teknolojia fidirana ion misy patanty tsy manam-paharoa dia mahatonga ny faritra marbra voahodina ho matevina kokoa, mafy sy mahazaka akanjo, ary "mamiratra nefa tsy malama".
Ny vokatra dia azo ampiasaina amin'ny vato rehetra misy calcium carbonate sy magnesium carbonate, toy ny marbra, vatosokay, marbra artifisialy ary terrazzo.
Bika Aman 'endrika Rano fotsy
fonosana 4CANS / CTN
Weight 4.5KG / Can
fampiharana: Marbra, travertine, vato artifisialy ary terrazzo
MR5 dia vokatra fikolokoloana gorodona vita amin'ny marbra ho an'ny famerenana amin'ny laoniny na fanamafisana ny marbra. Izy io dia afaka manamboatra haingana ireo rakotra niforona teo amin'ny marbra tamin'ny alàlan'ny fitafiana, famerenana na fanatsarana ny famirapiratry ny tany. Ny fikojakojana tsy tapaka dia afaka mitazona famirapiratana tsara mandritra ny fotoana maharitra, ary miaraka amin'izay dia mamorona sosona kristaly manjelanjelatra, mateza. Izy io koa dia ampiasaina hitazonana ny vato artifisialy.
Ny crystallization dia fomba famerenana gloss amin'ny gorodona vato misy kalsioma toy ny marbra, vatosokay ary travertine, hanatsarana ny endrika. Ny fizotrany dia ny famafazana crystallizer poloney amin'ny gorodona ary ny fametahana azy dia mampiasa milina gorodona miaraka amina volon'ondry na pad polishing. Ireo pads mifatotra amin'ny milina dia miteraka hafanana amin'ny kristaly, ary mamorona fitambarana vaovao ambonin'ilay marbra, noho izany, mba hiarovana ny marbra amin'ny fitehirizana ny lokony miloko ary mitazona ny famirapiratan'ny vato. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanadiovana marbra anaty trano fotsiny ary amin'ny ambaratonga rehetra dia mitady ny fampiharana azo ampiharina izy io toy ny amin'ny birao, magazay, tranobe ho an'ny daholobe, trano tsy miankina sy hotely.
Diovy ny gorodona ary ataovy maina.
Ahintsano ny kanety alohan'ny hampiasana azy.
Arotsaho amin'ny gorodona kely ny MR3 (5-10ML / m2)
Mifanentana amin'ny pataloha famolahana miloko fotsy na volon'ondry vy amin'ny milina fanaovana gorodona (Hafainganana 175rmp, na 154rmp).
Buff amin'ny milina poloney mandra-pahamainin'ny tany.
Avereno ny dingana 3-5 mandra-pahatonga ny tany ho matanjaka sy hazava kokoa.
Raha vao nampiasaina voalohany dia mila avereno in-2 ka hatramin'ny in-3 ara-dalàna.
Diovy amin'ny vovoka ny vovoka rehefa vita ny fandidiana. Ny fikojakojana ny fandefasana indray mandeha fotsiny dia tsy maninona.
Previous: Crystallizer poloney marbra MR3
Manaraka: Dingana iray Crystallizer spray N 'BUFF -2501
Crystallizers poloney marbra
Crystallizer ho an'ny gorodona marbra sy terrazzo –AG ...